China L'Oreal Royal Goridhe Inowedzera Cream PR Chipo Package vagadziri uye vanotengesa | BXL
Honours & Mubayiro
L'Oreal Royal yendarama yekuwedzera kirimu PR Chipo Pasuru
Muchikamu chekutanga chekutanga ichi chigadzirwa, vane mukurumbira vanobatsira nekusimudzira, saka chinhu chekutanga chekutarisa kana uchigadzira pasuru iyi ndeye nzira yekukwezva nekufadza vashandisi zvinooneka uye nehunyanzvi, uye kuratidza nzvimbo yekutengesa yechigadzirwa.
Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi uye zvichibva pakukosha kwebhizimusi, BXL Creative yakagadzira timu yebasa reL'Oreal ndokubhururuka kuenda kuShanghai kanoverengeka kuti vaite misangano nevatengi. Vakaitisa Zvakadzika-zvisikwa zveichi chigadzirwa, vachitarisa pane matatu magadzirirwo maonero: akajeka, kuenderana, uye chikamu.
Rakanaka kurongedza dhizaini basa rinofanirwa kuita kuti vanhu vade kubata uye kutenga. Zvichienderana nekukosha kwevanhu vekumusoro-soro, mugadziri akagadziridza dhizaini dhizaini: yakakwira-chikamu pfungwa, yemhando pfungwa, inonakidza, yakasarudzika, yakanakisa, kuratidza maitiro.
Chigadzirwa chikuru cheichi PR chipo bhokisi, huchi hudiki mini, inoshandisa yakakosha Manuka nekita kuratidza nzvimbo yekutengesa yechigadzirwa zvinoonekwa.
Rakanaka dhizaini basa rinofanira kuve rakasiyaniswa, uye iro remukati kurongedza uye kwekunze kurongedza kunofanirwa kuve mune yakaenzana chikamu.
Maumbirwo emabhokisi ekunze anoteedzerwa kubva mumikoko yenyuchi, maungira uye kuratidza hunhu hwepamusoro hwechigadzirwa, kusimbisa zvinoonekwa zvine ruzivo, uye kuratidza kunongedzwa kwekunaka kwechigadzirwa.
Chimiro cheumambo, inopenya goridhe ruvara, yakapfava arc shell kurongedza, pamusoro pebhokisi rechipo rine simba rezvinotarisirwa. Iyo yemukati inotora yakakwira-kukosha zvigadzirwa uye zvine hungwaru dhizaini: pateni yakagadzirirwa neuchi hwehuchi hwakasanganiswa neManuka maruva neuchi, pamwe chete nemwenje weakanakisa ekuratidzira mhedzisiro.
Zvadaro: L'Oréal's Zera Rakakwana Deluxe ganda rekuchengeta PR Giftset Packaging Dhizaini
6th Floor, Block One, Shenye Jinyuan Kuvaka, Qingshuihe, Luohu, Shenzhen, CHINA, 518023
About BXL Kugadzira